कसरी एक नकारात्मक समीक्षा अनलाइन को प्रतिक्रिया को लागी 10 नियम | Martech Zone
कसरी एक नकारात्मक समीक्षा अनलाइन को प्रतिक्रिया को लागी १० नियमहरु
आइतवार, सेप्टेम्बर 19, 2021 आइतवार, सेप्टेम्बर 19, 2021 Douglas Karr
एक व्यवसाय चलाउन अविश्वसनीय चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। चाहे तपाइँ यसको डिजिटल रूपान्तरण संग एक व्यापार को सहायता गर्दै हुनुहुन्छ, एक मोबाइल एप प्रकाशित, एक खुदरा आउटलेट हो, संभावना हो कि तपाइँ कुनै दिन तपाइँको ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई पूरा गर्न जाँदै हुनुहुन्न। जनता संग एक सामाजिक संसार मा रेटिंग्स र समीक्षा, केहि नकारात्मक अनलाइन समीक्षा प्राप्त गर्ने तपाइँको संभावना लगभग आसन्न छन्।
नकारात्मक मूल्या rating्कन वा नकारात्मक समीक्षा को रूप मा सार्वजनिक को रूप मा हुन सक्छ, यो जरूरी छ कि तपाइँ त्यो नकारात्मक मूल्या or्कन वा समीक्षा को लागी तपाइँको प्रतिक्रिया मात्र महत्वपूर्ण छ - यदि अधिक महत्वपूर्ण छैन भने। एक नकारात्मक समीक्षा को लागी एक राम्रो प्रतिक्रिया तपाइँको व्यवसाय को लागी अधिक सम्मान र विश्वास ड्राइभ गर्न सक्छ। आधुनिक व्यवसाय र उपभोक्ताहरु लाई थाहा छ कि प्रत्येक व्यापार अन्तरक्रिया सही हुनेछैन ... तर कसरी एक व्यापार प्रतिक्रिया जब यो बिग्रन्छ बिल्कुल महत्वपूर्ण छ।
म यो लेख लेख्दै छु मेरो वास्तविक अनुभव मा आधारित कसरी मैले देखीएको छु कि ब्यापारहरु एक नकारात्मक समीक्षा मा विजयी - मँ अध्ययन वा डाटा उद्धृत गर्न जाँदै छु किनकि मलाई लाग्छ कि प्रत्येक व्यवसाय एक संस्कृति र प्रक्रिया छ कि सधैं हुन सक्दैन। तथ्या of्क को एक गुच्छा मा समायोजित। यहाँ सुझावहरु को एक मेरो सूची छ र एक नकारात्मक समीक्षा को प्रतिक्रिया को लागी एक प्रक्रिया।
तपाइँ जवाफ दिनु पर्छ ... तुरुन्तै - एक तत्काल प्रतिक्रिया अन्य उपभोक्ताहरु र व्यवसाय छाप छ कि तपाइँ सुन्नुभएको छ र तपाइँलाई ख्याल छ प्रदान गर्न को लागी आवश्यक छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ निष्कर्षमा उफ्रिनु पर्छ, यद्यपि। कहिलेकाहीँ प्रतिक्रिया मात्र भन्दै छ कि तपाइँ उजुरी सुन्नुभएको छ र स्थिति को साथै यो कसरी समाधान गर्न को लागी अनुसन्धान गरीरहनुभएको छ।
सहानुभूति हो - ध्यान दिनुहोस् कि म कसरी "शो" सहानुभूति भन्दिन? यो तपाइँको हेरचाह को लागी एक समय हैन, यो एक समय हो कि वास्तव मा ग्राहक वा ग्राहक को धारणा छ कि उनीहरु लाई गरीब सेवा प्राप्त भयो भन्ने धारणा को बारे मा सोच्ने समय हो। जब तपाइँ यो व्यक्तिको जवाफ दिनुहुन्छ, बहाना गर्नुहोस् कि उनीहरु लाई मात्र आफ्नो जीवन को सबैभन्दा भयानक दिन भएको छ। मँ एक पटक एक नेताले मलाई बताउनु भएको थियो कि हरेक पटक उनी एक कर्मचारी संग एक सम्बन्धित कुराकानी मा संलग्न छन् कि उसले त्यो कर्मचारी भर्खर एक परिवार को सदस्य गुमाएको बहाना मा संलग्न थियो। मलाई लाग्छ कि यो राम्रो सल्लाह अनलाइन पनि छ।
धन्यबाद दिनुहोस् - जबकि त्यहाँ त्यहाँ मानिसहरु को एक धेरै सानो प्रतिशत मात्र दुखी trolls छन्, मानिसहरु को बहुमत सार्वजनिक रूप मा गुनासो गरीरहेछन् किनकि उनीहरु लाई उनीहरु लाई उनीहरु लाई कसरी व्यवहार गर्ने बारे मा ख्याल राख्छन् र आशा छ कि तपाइँ यो भविष्य मा अन्य ग्राहकहरु लाई नगर्नुहोस्। कि कसैले समय निकालेर तपाइँको ब्यापार मा एक मुद्दा को बारे मा लेख्न को लागी पनी धेरै मानिसहरु लाई असर गर्न सक्छ कि तपाइँ तपाइँको ब्यापार लाई सुधार गर्न को लागी अमूल्य प्रतिक्रिया हो।
सुन्नुहोस् - यदि अपेक्षाहरु पूरा भएनन्, तपाइँ तपाइँको आन्तरिक प्रक्रियाहरु लाई कसरी सुधार गर्न सक्नुहुन्छ मा तपाइँको ग्राहक लाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाइँ चकित हुनुहुनेछ कि कति ग्राहकहरु मात्र हुन चाहानुहुन्छ सुन्नुभयो जसरी उनीहरु बाहिर निस्कन्छन्। कहिलेकाहीँ मात्र सोध्छ, "हामी कसरी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौं?" तपाइँको व्यवसाय को लागी केहि समग्र ग्राहक सन्तुष्टि मा सुधार हुनेछ को लागी केहि अविश्वसनीय प्रतिक्रिया को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ।
तथ्यपरक हुनुहोस् - यो असामान्य छैन मानिसहरु लाई एक स्थिति अतिरंजित गर्न को लागी जब उनीहरु एक नकारात्मक समीक्षा छोड्छन्। कहिलेकाहीँ, अनलाइन समीक्षकहरु पूरै झुटो। यो ठीक छ नकारात्मक समीक्षा को लागी एक वास्तविक प्रतिक्रिया प्रदान गर्न को लागी जब सम्म तपाइँ सबै लागत मा समीक्षक मा हमला गर्न बाट बच्न। यो एक नाजुक स्थिति हो, तर तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को बारे मा एक झूट कहिल्यै जान दिनु हुँदैन।
एक संकल्प खोज्नुहोस् - एक संकल्प बाहिर खोज एक अनिवार्य छ। मैले केहि बर्ष पहिले घर सेवा प्रदायक मा एक महत्वपूर्ण लगानी गरे र सम्पूर्ण स्थिति एक आपदा थियो। मैले सबै विवरणहरु संग एक लामो समीक्षा अनलाइन छोडे पछि, कम्पनी को मालिक (जो स्थिति को बारे मा थाहा थिएन) व्यक्तिगत रूप मा म सम्म पुग्यो र सोधे, "हामी यो कसरी सही गर्न सक्छौं?"। समाधान सही थिएन, तर मैले नकारात्मक समीक्षा हटाए पछि कम्पनीले समय र उर्जा को प्रयास गरी स्थिति को समाधान गर्न को लागी लगानी गर्यो।
यसलाई अफलाइन लिनुहोस् - एक बहस अगाडि र पछाडि अनलाइन वा ईमेल को माध्यम बाट पनी तपाइँको व्यापार 'प्रतिष्ठा मद्दत गर्न जाँदै छैन। पुरानो उक्ति कि हामी "सार्वजनिक मा प्रशंसा, निजी मा सही" एक नकारात्मक समीक्षा स्थिति मा लागू हुन्छ। सधैं व्यक्ति मा कसै संग बोल्ने अवसर को लागी धक्का दिनुहोस् ताकि उनीहरु तपाइँको चिन्ता सुन्न सक्छन् र तपाइँ उनीहरुलाई उनीहरुको निराशा बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। पाठ पढेर एक प्रतिक्रिया मा करुणा को कुनै स्तर प्रदान गर्दछ। यदि समीक्षक तपाइँ अनलाइन हिट राख्न चाहानुहुन्छ, यो ठीक छ कि मात्र जवाफ दिन को लागी तपाइँको ढोका सधैं खुला छ तर तपाइँ यसलाई अफलाईन लिन को लागी ठीक छ।
तपाइँको प्रतिक्रिया को लागी एक अनुहार राख्नुहोस् - कोहि पनि एक विशाल निगम बाट प्रतिलिपि / टाँस्ने स्वतन्त्र प्रतिक्रिया मन पर्दैन। जब तपाइँ तपाइँको प्रतिक्रिया लेख्नुहुन्छ, तपाइँको नाम र सम्पर्क जानकारी राख्नुहोस् ताकि व्यक्ति त्यहाँ एक वास्तविक व्यक्ति हो कि स्थिति को समाधान को लागी जिम्मेवारी लिएको देख्छ।
संक्षिप्त हुनुहोस् - छोटो सम्भव प्रतिक्रिया अनलाइन एक नकारात्मक समीक्षा को लागी सबै भन्दा राम्रो प्रतिक्रिया हो। व्यक्तिलाई धन्यवाद, मुद्दा स्वीकार, एक संकल्प को लागी काम, र सम्पर्क जानकारी प्रदान गर्न को लागी एक संकल्प अफलाइन को लागी। अनुच्छेद र अनुच्छेद लेख्न को लागी कुनै जरूरी छैन कि कोहि पनी पढ्न वा मूल्य जाँदैछ।
आवश्यक पछि अनलाइन फलो गर्नुहोस् - म प्राय मोबाइल अनुप्रयोगहरु को बारे मा नकारात्मक समीक्षाहरु लाई देख्छु कि बगहरु लाई भविष्य को संस्करणहरुमा सही गरीएको थियो। यो बिल्कुल महत्वपूर्ण छ सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न को लागी कि मुद्दा हल भयो र उसलाई रिपोर्ट गर्ने व्यक्ति लाई धन्यवाद। यो व्यक्तिगत प्रस्तावहरु को लागी मामला हैन ... मात्र सार्वजनिक प्रक्रियाहरु वा धेरै ग्राहकहरु को लागी मुद्दा को हल कि उत्पादन परिवर्तन। एक समीक्षक तपाइँ तपाइँको ब्यापार लाई बढावा दिन को लागी एक माध्यम को रूप मा आफ्नो व्यक्तिगत स्थिति को संकल्प अनलाइन प्रसारण हेर्न चाहनुहुन्न।
ग्राहक सधैं सही छैन
ग्राहक छैन सधैं सही। मलाई लाग्छ कि यो सबैभन्दा खराब भनाइहरु मध्ये एक हो। मँ मेरो व्यापार को जीवन मा धेरै धेरै धेरै असभ्य ग्राहकहरु मा भागेको छु। मँ सधैं तथ्यहरु मा निर्भर जब यो ती परिस्थितिहरु को लागी आउनुभयो र भावनात्मक प्रतिक्रिया वा आरोप बाट बच्यो। विशेष गरी जब यो मेरो कर्मचारीहरु को लागी आउनुभयो जो बिल्कुल माथि र बाहिर गएर स्थिति को समाधान को कोशिश मा परे।
मँ बरु एक राम्रो कर्मचारी को रक्षा र एक खराब ग्राहक कि एक स्थिति को बारे मा झूट बोलेर हराउनु भन्दा बचाउन चाहन्छु।
एउटा रेष्टुरेन्ट मैले काम गरेको थिएँ शंकास्पद, गुमनाम, नकारात्मक समीक्षाहरु कि भाँडा कि उनीहरु पनि प्रस्ताव गर्दैनन् टिप्पणी गरे। उनीहरु लाई समीक्षा को लागी वास्तविक प्रतिक्रिया दिईयो जबकि समीक्षक अनलाइन संग कुनै टकराव बाट बच्न।
कहिल्यै हमला समीक्षक
कहिल्यै आक्रमण नगर्नुहोस् वा जोड नदिनुहोस् कि तपाइँको समीक्षक झूट बोल्दै हुनुहुन्छ वा एक समीक्षक अनलाइन संग एक बहस मा पाउनुहोस्। अधिक नकारात्मकता संग एक नकारात्मक समीक्षा को प्रतिक्रिया एक हेरचाह, दयालु, र उचित व्यापार को रूप मा तपाइँको व्यापार 'प्रतिष्ठा दफन को एक पक्का आगो तरीका हो। यो तथ्यहरु को उपयोग गरेर तपाइँको व्यापार को बारे मा झूट झुट को रक्षा गर्न को लागी ठीक छ ... तर कहिल्यै, कहिल्यै समीक्षक मा हमला वा जोड दिनुहोस् कि उनीहरु गलत छन्। एक ग्राहक जसले तपाइँलाई एक झूटा अनलाइन तिर्नु भएको छ अधिक व्यापार तपाइँको बाटो ड्राइभ गर्न को लागी कहिल्यै जाँदै छैन।
नकारात्मक समीक्षा प्रतिक्रियाहरु को उदाहरणहरु
म नकारात्मक समीक्षा प्रतिक्रियाहरु को केहि उदाहरणहरु प्रदान गर्न चाहान्छु कि तपाइँ एक उपयुक्त प्रतिक्रिया कि तपाइँ तपाइँको समग्र प्रतिष्ठा अनलाइन सुधार गर्न मा मदद गर्न को लागी क्राफ्टि in मा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केहि अवस्थाहरु छन्:
एक नकारात्मक समीक्षा तपाइँ अधिक अनुसन्धान को लागी आवश्यक छ
[नाम], यो हाम्रो ध्यान मा ल्याउन को लागी धन्यवाद। हामी धेरै गम्भीरताका साथ हाम्रा ग्राहकहरुको प्रतिक्रिया लिन्छौं र सधैं अपेक्षाहरु लाई पार गर्न चाहन्छौं। हामी यो मुद्दा को जांच गरी रहेका छौं र हाम्रा स्टाफहरु को सम्पर्क मा अर्को २ व्यापार दिन भित्र हुनेछन्। हामी यो स्थिति को बारे मा अधिक सुनेर सराहना गर्दछौं र तपाइँको प्रतिक्रिया को मूल्य हुनेछ। के यो ठीक हुन्छ यदि हामी फोन बाट सम्पर्क गर्यौं? मलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाउनुहोस् [मेरो नाम] वा मेरो एक्सटेन्सन [X] [फोन नम्बर] मा कल गर्नुहोस्।
यो हाम्रो ध्यान मा ल्याउन को लागी धन्यवाद। हामी धेरै गम्भीरताका साथ हाम्रा ग्राहकहरुको प्रतिक्रिया लिन्छौं र सधैं अपेक्षाहरु लाई पार गर्न चाहन्छौं। हामी यस स्थिति को बारे मा अधिक जान्न को लागी तपाइँ बाट सुन्ने सराहना गर्दछौं। के यो ठीक हुन्छ यदि हामी फोन बाट सम्पर्क गर्यौं? मलाई सीधा सन्देश [मेरो नाम] वा मेरो एक्सटेन्सन [X] [फोन नम्बर] मा कल गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
एक गलत नकारात्मक समीक्षा
[नाम], हामी त्यो उत्पादन प्रस्ताव गर्दैनौं। के तपाइँ कृपया मलाई [मेरो नाम] लाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा मेरो एक्सटेन्सन [X] लाई [फोन नम्बर] मा कल गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामी यो स्थिति को बारे मा अधिक जानकारी पाउन सक्छौं?
एक साँचो नकारात्मक समीक्षा
[नाम], यो हाम्रो ध्यान मा ल्याउन को लागी धन्यवाद। हामी सधैं ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई पार गर्न चाहन्छौं र यो हाम्रो लागी एक महान अवसर को लागी यस्तो देखिन्छ। हामी तपाइँलाई व्यक्तिगत रूप मा यो कुरा गर्न को लागी तपाइँको व्यापार गर्न को लागी हाम्रो लागी महत्वपूर्ण छ। के यो ठीक हुन्छ यदि हामी तपाइँलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्छौं? मलाई प्रत्यक्ष सन्देश पठाउनुहोस् [मेरो नाम] वा मेरो एक्सटेन्सन [X] [फोन नम्बर] मा कल गर्नुहोस्।
एक नकारात्मक समीक्षक कि जाँदै रहन्छ
[नाम], दुर्भाग्यवश, जब सम्म हामी तपाइँलाई व्यक्तिगत रूप मा यस स्थिति को जांच गर्न को लागी बोल्छौं, हामी यहाँ स्थिति को समाधान गर्न सक्षम हुनेछैनौं। कृपया मलाई सीधै सन्देश पठाउनुहोस् [मेरो नाम] वा मेरो एक्सटेन्सन [X] [फोन नम्बर] मा कल गर्नुहोस्।
एक नकारात्मक समीक्षा बाट एक हल प्रक्रिया
[नाम], धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो ध्यान को लागी यो मुद्दा ल्याउन को लागी र समस्या को समाधान गर्न को लागी हामी संग समय बिताउन को लागी। यो मुद्दा अनलाइन पछी जो कोहि को लागी एक FYI को रूप मा, हामी हाम्रो उत्पादन / प्रक्रिया परिमार्जन गरीएको छ र [मिति] को रूपमा यो मुद्दा लाई हटाईएको छ।
यो एक नकारात्मक समीक्षा मा छोड्न ठीक छ
कहिलेकाहीँ एक व्यापार संलग्नता मात्र बाहिर काम गर्दैन। तपाइँ एक नकारात्मक समीक्षा को समाधान गर्न को लागी सबै चीज को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ र यो रिजोलुसन को कुनै पनी प्रकार को परिणाम हो कि ग्राहक रिवर्स पाठ्यक्रम बनाउँछ वा समीक्षा हटाउन सक्दैन। यो हुनेवाला छ।
जब सम्म उपभोक्ताहरु र व्यवसायहरु देख्छन् कि तपाइँ तपाइँको शक्ति मा सबै कुरा गर्न को लागी प्रयास गरीरहनुभएको छ र नकारात्मक समीक्षा को लागी स्थिति को समाधान गर्न को लागी, उनीहरु तपाइँलाई शंका को लाभ दिनेछन्।
नकारात्मक समीक्षा को लागी सबै भन्दा राम्रो प्रतिक्रिया अधिक सकारात्मक समीक्षा हो
यदि तपाइँको ब्यापार केहि नकारात्मक समीक्षाहरु संग लडिरहेको छ कि मात्र टाढा जाने छैन, सबै भन्दा राम्रो उपाय खुसी ग्राहकहरु लाई अनुरोध गरीरहेछन् र उनीहरुलाई तपाइँको कम्पनी को लागी चमकदार समीक्षाहरु प्रदान गर्न को लागी धक्का। जबकि धेरै उपभोक्ताहरु नकारात्मक समीक्षाहरु (म गर्छु) पढ्न को लागी उफ्रनेछन्, त्यहाँ कुनै संदेह छैन कि महान समीक्षा को एक भारी प्रतिशत तपाइँको प्रतिष्ठा को आफ्नो दृष्टिकोण मा एक प्रभाव हुनेछ।
र, निस्सन्देह, प्रत्येक नकारात्मक समीक्षा को लागी एक विचारशील प्रतिक्रिया देखी जहाँ तपाइँ एक संकल्प मा आउन को लागी कोशिश गरीयो अझ धेरै मद्दत गर्दछ!
टैग: कसरीनकारात्मक समीक्षा अनलाइननकारात्मक समीक्षा प्रतिक्रियानकारात्मक समीक्षाअनलाइन समीक्षासमीक्षा
प्रमाणित मार्क प्रमाणपत्र (VMCs) को साथ ईमेल मार्केटि in मा तपाइँको ब्रान्ड र प्रतिष्ठा को रक्षा